ezaposwa ngomhla 05 / 30 / 2018 by UDkt Patrick Young bha liweyo Ithala.
10.Aniracetam Amava omsebenzisi wePower
11Nokungathenga iindawo ezingcono zeNootropics I-Aniracetam Powder yokuphuculwa kwengqondo.
Izifundo eziliqela zokuqala zibonise ukuba i-Aniracetam Powder eluhlaza ingaba yinzuzo kwabanye abantu abanokukhubazeka kwengqondo. Ngokomzekelo, uphando lwe-2012 olupapashwe kwi-CNS Neuroscience & Therapeutics lufumene ukuba unyango lwabantu asebekhulile nge-Aniracetam Powder ngonyaka lukhokelela ekuphuculeni okubonakalayo kumsebenzi wokuqonda. Ukubandakanya abantu abadala abadala be-276 abaneengxaki zengqondo, uphando lufumanise ukuba i-Aniracetam Powder eluhlaza yayinempembelelo enomdla kunye nempilo enempilo.
6. Yiyiphi i-Nootropic esebenzayo?
I-J-147 yaqulunqwa kwi-2011, kwaye kwiimvavanyo zakuqala zafunyanwa ukuphucula imemori kwimizi ebini ephilileyo kunye nalabo abane-Alzheimer, kwaye ikwazi ukukhusela ingqondo ukuba ingabikho komonakalo. Kwiminyaka embalwa kamva, le nkunkuma ifumaneka ukuba neenzuzo ezininzi zokuguga. Kodwa ngelixa iimvavanyo zazibonisa ukuba zisebenza, abaphandi babengenakunyaniseka ngokuqinisekileyo ukuba, kwaye kunye nesichengiselwano esele silungele ukuhlolwa kweziluntu kubalulekile ukuchofoza kakuhle loo ndlela.
Kwisifundo esitsha, iqela le-Salk lifumene ukuba i-J-147 powder ibophelela kwiprotheyini ebizwa nge-ATP synthase, enoxanduva lokuvelisa iselula "imali yamandla" ebizwa ngokuba yi-ATP. Le protheni iyaziwa ukulawula ukuguga kwiimbungu kunye neempukane, kwaye abaphandi bafumanisa ukuba ngokuzibophelela kweso siza sakwazi ukunqanda umonakalo onxulumene neminyaka ebuchosheni.
10. I-Aniracetam Amava omsebenzisi wePowder
Ukulandela iziphakamiso eziqhelekileyo, uDavid ugxotha ipilisi ye-750 mg. Emva kweyure elilodwa kuphela, uqala ukufumana iimvakalelo ezifihlakeleyo zokuba kwindawo kunye nokugxininisa ngakumbi. Ekuqaleni, uyaphawula ukuba akaqinisekanga ukuba yilezi ziyobisi, kodwa unesivakalelo, nangona kunjalo.
Phantse iiyure ezimbini, uDavid ubika ezinye izinto ezithandekayo. Uyabona ukuba uvakalelwa ngumoya kwaye akapheli. Unqumla kumsebenzi ukuba asebenze, kwinto abiza ngayo "ukuxhamla okukhulu." Nangona engacingi ukuba yinto embi, ubuncinane banobuqili, kwaye kufanelekile ukuphawula. Ngenhlanhla, akukho miphumo emibi ekufunweni kwakhe, njengoko ehlawula i-almond xa erekhoda isiqephu.
Iiyure ezine neyesigamu kwaye uDavid uneendaba ezinkulu. Uvakalelwa kukuba uncedise izinga eliphezulu lokugxila kunye nenomdla kulokho akwenzayo. Ayikho i-100% eqinisekile ukuba yi-Aniracetam Powder eyabangela iseshoni yomsebenzi ovelelekayo, kodwa iziphumo zibalulekile kangangokuthi ubiza ukuzama ukuphumelela kwe-Round 1, kwaye ngokuqinisekileyo ufanelekile ukunika elinye ixesha elizayo.
I-AASraw inikezela ezininzi ezininzi I-Nootropics powder iimveliso kunye nezinye i-steroids eziphathekayo (i-aasraw material), i-hormone ye-hormone powder, i-fat loss hormone powder, i-SRMAS powder ... njl. njengokuba. Ukongeza kokuzinikela kwabo kumgangatho, i-AASraw inikezela ngeenkonzo ngokukhawuleza nangokukhuselekileyo. Ngokukodwa ukuya e-USA, i-AASraw inikeza i-USA ukuhanjiswa kwekhaya. Kodwa akuthethi ukuba ne-stock e-USA. Kuthetha ukuba, i-AASraw ine-ejenti yokuhanjiswa e-USA, xa wenza umyalelo nge-AASraw, ipakisha yakho iya kuthunyelwa kwi-AASraw i-ejenti yokuthunyelwa e-USA kuqala, kwaye thumela kwidilesi yakho emva kokugqitywa kwesihlomelo. Inkqubo yokuhanjiswa kwe-AASraw iya kuthatha inkqubo yokukhutshwa komsebenzi, akukho mfuneko yokusebenzisa umthengi ukufumana ulwazi. Ngoko, akukho nto ichaphazela kwikhuseleko lakho kwidilesi ngaphambi kokuba inkqubo yohlwayiso lwenkcubeko igqitywe.